4 GB RAM Memory Booster အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
8.3 for Android
4.3 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（8.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက်4GB RAM Memory Booster - Cleaner | AppLock | Cool
🏆bestအမြန်နှုန်းမြှင့်စားမှုနှင့်သင်၏ကိရိယာအတွက် junk cleaner app!
သင်၏ Smart Device ၏မြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင့်အား junk သန့်ရှင်းရေးတွင်သင့်အားကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
သင့်ဖုန်းနှေးနေလျှင်။ သိုလှောင်မှုပိုလိုသည်။ အလွန်မြန်ဆန်သောဘက်ထရီ။ အက်ပ်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ပါ။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုလျှို့ဝှက်စွာကြည့်ပါ။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်ပါ0င်သည်။
🚀 u 🚀🚀🚀🚀🚀🚀★ဖုန်းအာကွဲဝါ
B> သင်၏ device app cache, system cache files, assolete ဖိုင်များ, ဒါကသင့်ရဲ့ဖုန်းသိုလှောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မယ်။
app locker သည်အက်ပလီကေးရှင်းများ, ဓါတ်ပုံများ, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အခြားသီးသန့်အချက်အလက်များကိုစကားဝှက်, B> 🧊🧊★ဖုန်းအေး:
သည်အပူချိန်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း, CPU အပူချိန်နှင့်ဘက်ထရီအပူချိန်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဖုန်းအပူချိန်ကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
🔋★★ Power Saving:
📱★★★📱 manager ★ >> သိုလှောင်မှုပိုလိုအပ်သည့်အခါအသုတ်တွင် app တစ်ခုသို့မဟုတ်အက်ပ်များအနေဖြင့်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်သင့်အားစိတ်ကြိုက်အသိပေးခြင်းကိုသန့်ရှင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ Device Notification Panel တွင်ပြသသည့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အသိပေးချက်များအားလုံးကိုသင်သန့်ရှင်းစေနိုင်သည်။
ဤအင်္ဂါရပ်သည်သင်၏ install လုပ်ထားသောဂိမ်းများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်စီမံနိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏ဂိမ်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ သင့်အားအက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း၌ဂိမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သည်သင်အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကိုမည်သည့်သမိုင်း, cookies, cache and စသည်တို့ကိုမလွယ်ကူပါ သမိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ browsing အတွေ့အကြုံကိုလျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
☢️★ data monitory:
သည်သင်၏ပုံတူဖိုင်များကိုအလွယ်တကူရှာဖွေပြီးဖယ်ရှားပေးနိုင်သည် Android မိုဘိုင်းဖုန်း။
သင်၏တုန့်ပြန်ချက်များသည်အမြဲတမ်းပိုမိုကောင်းမွန်စွာတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည် ပိုပြီးအေးမြ features တွေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ကျေးဇူးပြု. အမေရိကန်ကြယ်5ပွင့်ပါ★★★★★ Google Play စတိုးတွင်ရှိသည်။
ဘာအသစ်လဲ4GB RAM Memory Booster - Cleaner | AppLock | Cool 8.3
WhatsApp cleaner crash fixed.
Duplicate file remover crash fixed.
Recovery file crash fixed.
Best Ram Booster (2GB) (3GB) (4GB) (6GB) (8GB) 2021
Add 4Gb Extra RAM in Any Phone Using 1 Trick | Boost Free Fire Gaming Performance Tutorial
How to clean android RAM & Speed up your phone
How To Fix High RAM/Memory Usage on Windows 10 [Complete Guide]
The Untold Secret To INCREASE RAM IN WINDOWS 10 (in3Minutes)
4 GB RAM Memory Booster 8.1.2
4 GB RAM Memory Booster 8.1
4 GB RAM Memory Booster 7.9.8.5